Posted on Dai 12, 2017 November 20, 2020 by Emma Louie
Zuva raamai izuva ratinopemberera amai vedu vanoshanda nesimba nerutsigiro uye nehanya kwavanoita. Pazasi pane zvitanhatu zvinhu zvekuita paZuva raAmai rekupera kwevhiki uko munhu wese anogona kunakidzwa nekupemberera zuva raamai. Naivowo vese wiricheya hushamwari!
Ndiani asingadi brunch? Chikafu chakakwana chekupemberera Zuva raamai nemhuri uye neshamwari. Maresitorendi mazhinji ari wiricheya inowanikwa asi ita shuwa yekutarisa usati waenda.
2. Masikati Tea
Kutsvaga chiitiko chemasikati kuti uite? Masikati tii ndicho chinhu chekuita. Zviri nyore asi zvine mutsigo. Mazhinji nzvimbo dzemasikati dzinouya ne mini pastries uye kubheka zvinhu uye hari yeti. Chinhu chinoshamisa chekuitira amai / mwanasikana nguva yekubatanidza.
3. Kukwira makomo
Nakidzwa nezuva raamai vhiki yevhiki nekuenda kunokwira neshamwari kana nemhuri. Kwete chete iwe unowana kunakirwa nerakanaka Amai Rakasikwa, iwe zvakare unowana kushandisa nguva nekambani yakanaka. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kwaungawana nzvimbo dzekukwira, tinya pano.
Vanamai vanokodzera kunyatso kumerera paZuva raAmai. Ndiwo akakwana amai mwanasikana vaviri basa rekuita. Mazhinji ma spas ari mukati memahotera ane wiricheya inowanikwa makamuri ane masuo akapamhamha uye roll mumashairi. Ive neshuwa yekutarisa kaviri iyo spa nzvimbo yauri kuenda iri wiricheya kufambidzana.
5. Kunze Kudya, Mumhanzi, uye Bhaisikopo
Kutsvaga nzvimbo ine zvese zvese munzvimbo imwechete? Iyo Street Chikafu Cinema chiitiko chekunze kwaunogona kudya, teerera kurarama mimhanzi, uye tarisa bhaisikopo rekunze. Marori ezvokudya ari chero zvakadaro unogona kuva nepikiniki iwe uripo. Kwete chete iyo inowanikwa iyi amai vevhiki vhiki, iwe unogona kuenda chero nguva zvichibva pane yavo purogiramu. Vanotamba mafirimu akasiyana pese paunoenda. Izvo zvakare wiricheya inowanikwa! Kuti uwane rumwe ruzivo, tinya pano.
Nzira Yokuita Nayo Imba Yako Wiricheya Shamwari